CO2 laser ọnwụ osise igwe - China Dongguan Glorystar Laser
Product Njirimara CO2 laser osise na ọnwụ igwe usoro jiri mere mba elu DSP akara technology, ha nwere elu ọsọ, elu ọnwụ ziri ezi na elu kwụsie ike, àgwà na price ruru bụ nnọọ elu. Isi usoro nwere ike nyere n'iwu site U-disk enweghị PC njikọ. Ọ nwere ọrụ nke imitative ọnwụ, na agba nkewa ọnwụ, na-abụghị na-akwụsị ịcha ozugbo anya ike, wdg Mechanical Design Nke a usoro igwe nwere kpọmkwem n'ibu ewu na akwadebe na siri ike ...
CO2 laser osise na ọnwụ igwe usoro jiri mere mba elu DSP akara technology, ha nwere elu ọsọ, elu ọnwụ ziri ezi na elu kwụsie ike, àgwà na price ruru bụ nnọọ elu. Isi usoro nwere ike nyere n'iwu site U-disk enweghị PC njikọ. Ọ nwere ọrụ nke imitative ọnwụ, na agba nkewa ọnwụ, na-abụghị na-akwụsị ịcha ozugbo anya ike, wdg
Usoro isiokwu a igwe nwere kpọmkwem n'ibu ewu na akwadebe na ihe siri ike ma anụ si eku. Ọ adopts elu ọsọ elu ndu okporo ígwè, dị n'itinyekwu moto na ọkwọ ụgbọala mma izi ezi nke n'ibu transmissibility.
N'ịkpa dị oghere na enyo na ngwa anya usoro iji hụ na ogologo ndụ nke laser tube na elu ọnwụ arụmọrụ.
Osise na ọnwụ nke akwụkwọ, ákwà, plastic, na-abụghị kpara akwa na uwe na-egwuri egwu, ụlọ ọrụ, na-yana idobe okirikiri nke kpọmkwem ọnwụ na-abụghị ndị metal ihe, dị ka acrylic na MDF iba ke Akpa, uwe, ebu, mgbasa ozi, mma, ọkụ na ngwa oru na plastic ọrụ.
Osisi e ji wuo, akwụkwọ, na akpụkpọ anụ, akwa, organic iko, resin, acrylic, woolens, plastic, roba,
seramiiki, crystal, jed, achara na ndị ọzọ na-abụghị ndị metal ihe.
osise Speed 0-64m / m
Megharịa Accuracy ± 0.05mm
N'ịga System CNC akara usoro
jụrụ mode Mmiri na-jụrụ na-echebe usoro
N'ozuzu Power Oriri ≤1250W
na-arụ ọrụ voltaji 220 ± 10% 50Hz (60Hz)
operating okpomọkụ 0 ~ 45ºC
operating iru mmiri 5% -95%
ịchịkwa Software Glorystar laser software
Graphic akwado Format PLT, Ai, JPG, PNG, TIF, PCX, TAG,
Previous: Single Station Laser ịgbado ọkụ Machine
Osote: Eriri laser marking igwe
Metal Laser osise Machine
GLC-1080 laser ọnwụ osise igwe
Ugboro abụọ ndi isi Laser osise na ịcha Machin ...
GLC-960 laser ọnwụ osise igwe
GLC-1610 laser ọnwụ osise igwe
Ibughari Ma inyerịta Isiokwu Laser Cutting Machine
Large Size Ewepụghị ndina Laser Cutting Machine GLC-1325